Hidhamtoota Mana Hidhaatii Baasuun Ajjeesuun Hatattamaan Dhaabbachu Qaba! – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooHidhamtoota Mana Hidhaatii Baasuun Ajjeesuun Hatattamaan Dhaabbachu Qaba!
Hidhamtoota Mana Hidhaatii Baasuun Ajjeesuun Hatattamaan Dhaabbachu Qaba!
(Ibsa Koree Deeggarsa Hidhamtoota Siyaasaa Lammilee Oromiyaa (KDHSLO)
Ebla 23, 2021)
Lammiileen Oromiyaa manneen hidhaa guutumma Goleelee Oromiyaa keessatti Murna Biltsiginnaa (PP) Dr. Abiyyi Ahimedin durfamuun jumlaan ukkanfamanii ugguraman kumaatamaan kan lakkawaman ta’uun ifaa dha. Murni Biltsiginnaa/Badhaadhinaa baanamu kan Waraana Biyyaa fi Qabeenyaa biyyaa dhuunfatee aangoo Polotikaa Afaan Qawweetiin dheereffachuuf abjuurra jiru, hidhamtoota siyaasaa lammiilee Oromiyaa mana murtiitti utuu hin dhiheessiin Buufataalee Poolisii, mooraa waraanaa, Manneen sirreesaa, Manneen Kuusaa fi Manneen barnootaa osoo hin hafin guutummaa goleelee Oromiyaa keesatti bakkoota heddutti gidirsaa jirachuun ni beekama. Dabalataanis warreen mana murtii dhiyaatanii akka gadi lakkifamani murteeffameefis humna afaan qawwee qabuun hidhamtoota dirqisiisuun bakka itti jijjiiruun tursiisaa jiraachuu argaa jirra.
Haata’u malee dhiheenya kana hidhamtoota manni murtii gadi lakkise butee achi buuteen isaanii dhabamuu fi ajjeefamanii gatamuun baratamaa dhufeera. Haalli kuni bakkoota muraasatti (keessumaa Onoota wallaggaa fi Gujii)tti haa eegalu malee amma godinoota Oromiyaa maratti raawwachaa jira.
Gochaan diinummaa fi garjabinni akkanaa kun koree keenya hedduu yaaddessee jira. Kanaaf gochi kun akka dhaabbatuu fi mirgi namoomaa hidhamtoota siyaasaa lammiilee Oromiyaa akka eegamuuf sagalee keenya xalayaa kanaan uumata Oromiyaa, qaamolee dhimma hidhamaa irratti hojjetanii fi mirga namoomaa beeksisuu feena.
Haaluma kanaan ummatni Oromiyaas ta’e qaamotni dhimmi isa ilaalu hidhamtoota siyaasaa lammiilee Oromiyaa gidduu kana mana hidhaatii baafamanii ajjefamani dhimmi isaanii akka qoratamu akka gaafatu waamicha keenya gadi jabeesinee dhiheessuu feena.
Kanumaan waliin, gochaa gar jabinaa Loltoonni Murna Biltsigunnaa hidhamtoota Siyaasaa toohatamanii toohannaa seeraa jala jiran yeroo darbaa mana hidhaa keessaa baasuun ajjeesanii Bosonatti gatan Koreen keenya Koreen Deeggarsa Hidhamtoota Siyaasaa Lammiilee Oromiyaa (KDHSLO) tarrisa maqaa isaanii hanga argatee akka armaan gadiitti kunoo dhiheesseera. Akka Kanaan tarrifni maqaa namootaa mana hidhaa keessaa baafamuun ajjeefamanii Bosonatti gatamanii Naannoo itti ajjeefaman waliin,
Balaay Xiiqii: Godina Horroo Guduruu wallaggaa, ona Jimmaa Raaree magaalaa Waayyuu
Baanee Nagarii: Godina Horroo Guduruu wallaggaa, ona Jimmaa Raaree magaalaa Waayyuu
Guutaa Carranaa: Godina Horroo Guduruu wallaggaa, ona Jimmaa Raaree magaalaa Waayyuu
Biraanuu Tolasaa: Godina Horroo Guduruu wallaggaa, ona Jimmaa Raaree magaalaa Waayyuu
Cimdeessaa Xaafaa: Godina Horroo Guduruu wallaggaa, ona Jimmaa Raaree magaalaa Waayyuu
Obbo Alamaayyoo Nagaraa: Godina Horroo Guduruu wallaggaa, ona Amuruu ganda Ejeree
Adinaan Taajuu: Godina Jimmaa, ona Limmuu Saqqaa, ganda Semoo Abukkaa
Kaamiil Jihaad: Godina Jimmaa, ona Limmuu Saqqaa ganda Semoo Abukkaa
Tamkiin Ahimad: Godina Jimmaa, ona Limmuu Saqqaa ganda Semoo Abukkaa
Naziif Maammadnuur: Godina Jimmaa, ona Limmuu Saqqaa, ganda Semoo Abukkaa
Abaadir Taajuu: Godina Jimmaa, ona Limmuu Saqqaa, ganda Semoo Abukkaa
Abdulhamiid Abdallaa: Godina Arsii Lixaa, ona Dodolaa, ganda Buuraa Addeellee
Asaffaa Kushii: Godina Shawaa Bahaa, magaala Fiichee
Geetuu Jireenyaa: Gidina Kibba Lixa Shawaa, ona Ammayyaa
Fanjaa Wayyaa: Arsii Lixaa, ona Shaallaa magaalaa Ajjee
Gaalib Abbaa Sambii: Godina Jimmaa
Kitilaa Guddataa: Godina Horroo Guduruu, magaala Saqalaa
Biraanuu Gabayyoo: Godina Horroo Guduruu, magaala Saqalaa
Shiggee Baayyisaa: Godina Horroo Guduruu, magaala Saqalaa
Mohammed Alii Tolaa: Kaaba Oromiyaa Walloo
Kadir Abdellaa: Godina Harargee Bahaa, ona Qobboo
Mahaammad Daadhii: Godina Harargee Lixaa, ona Habroo
Mohammed Shamsadiin: Godian Buunnoo Bedelle
Araarsoo Gammachuu: Godina Lixa Wallaggaa, magaala Najjoo, ganda Jaboo Mikaa’ilii
Obbo Areerii fi Boonaa Areerii ganna 12 Abbaa fi ilma :Godina Gujii Ona Sabbaa Boruu.
Waan ta’eef, Lammiilee Oromiyaa toohatamanii toohannoo seeraa jala osoo jiranii, murtoo seeraa dhabuun dararamaa jiraachuu cinatti saa’atii darbaa manneen hidhaa keessaa baasuun ajjeesanii Bosonatti gatan, Koreen Deehggarsa Hidahmtoota Siyaasaa Lammiilee Oromiyaa(KDHSLO) gadi jabeesse ballaaleffata; Hidhamtoota mana hidhaatii baasuun Ajjeesuun dhaabbachuu qaba!
Hidhamtoota Siyaasaa Lammiilee Oromiyaaf sagalee haa taanu!
Koree Deeggarsa Hidhamtoota Siyaasaa Lammilee
Koree Deeggarsa Hidhamtoota Siyaasaa Oromoo(KDHSO) irraa haala hidhaan Oromiyaa keessatti itti adeemaa jiru:
Guraandhala 3, 2021
Sirna abbaa irree dhufaa darbaa Impaayera Itoophiyaa jalatti, hireen saba Oromoo duula cunqursaa kan walii galaa egeree sabichaaf yaaddessaa ta’e jalatti gidirfamaa ta’uun jaarraa lakkoofsiseera. Bara baraan hidhaa, ajjeechaa, qe’ee ofiirraa buqqaafamuu, siyaas-dinagdee biyyoolessaa keessaa moggeessuu fi maqaa yakkaa garaa garaa itti moggaasuun akka inni boquu ol-qabatee jaarmiyaan ijaaramee dhimma hawwaassummaa, dinagdee fi siyaasaa keessatti hirmaatee, sadarkaa sabaa fi biyyaatti fooyyee hin agarsiisne gaadi’uun aadaa wal fakkaataa moottummaan abbaa irree Impaayerichatti wal jijjiiraa turanii fi jiran hundi hordofan ta’uu gochaawwan suukanneessa ilma namaaf hin malle Oromiyaa keessatti raawwatamaa turee fi harras daran hammaatee itti fufe qalbeefachuu caalaa ragaan hin jiru.
Oromoon eega cunqursaa jalatti kufee kaasee, qabsoo mirgaa geggeessuu fi wareegama itti baasuu irraa aara galfatee, nuffee, dadhabe jedhee hin beeku. Waggoota kurnootaa asi, bifa jaarmiyaan ijaaramee, bifa qindaa’ee fi ititeen gaaffii isaa kan abba biyyummaa, mirga hiree murteeffannaa sabootaa, biyya feederaalizimii sab-daneessaa kan mirgi dimokiraasii fi namoomaa lammii biyyattii hundaa wal qixa keessatti kabajamu akkuma gaafachuu eegaleen tarkaanfiin farrummaa mootummoota abbaa irrees itti hammaachaa fi daran baballachaa deeme.
Fincilli diddaa garbummaa kan qeerroon bilisummaa oromoo jaarmiyaa siyaasaa hangafaa sabicha bakka bu’u Adda Bilisummaa Oromoo(ABO) jalatti hiriiruun, bifa qindaa’ee fi adduunyaa guutuu ajaa’bsiiseen, karaa nagaa, harka duwwaa qoma isaa waraana hamma funyaaniitti hidhate dura qabee, wareegama qaalii lubbuu kumootaa, qaama hir’achuu, hidhaa fi dararaa hiriyyaa hin qabne biroo jala dhaabbatee, sirna abbaa irree mootummaa paartii Adda Dimokiraatawaa Warraaqsa Ummattoota Itiyoophiyaa (ADWUI)’tti xumura gochuun yaadannoo madaan isaa hin qooriin jiru dha.
Warraaqsa ADWUI galaafate sana booda, ABO fi dhaabbileen siyaasa Oromoo karaa nagaa qabsaa’an kan biroon, akka jeequmsi siyaasaa biyyattii mudate furamuu fi hammaatee sadarkaa ol-aanaatti hin ceene tattaafachuu, filannoon dimokiraatawaa fi haqa qabeessi geeggeefamee, sirni federaalizimii sab-daneessaa kan mirgi hundaa wal qixa keessatti kabajamee fi hunduu wal qixa fayyadamaa itti ta’u abjootuu, akeekuu fi watwaatuu jabeessani. Haa tau malee mootummaan namoota sirna cunqursaa duraanii ADWUI keessaa walitti qabamaniin tolfamee fi qaawwa uumameen aangoo siyaasaa biyyattii dhuunfate, Paartii Badhaadhinaa jedhee maqaa jijjiirrachuun alatti amala aadeffate irraa fayyee jijjiirama abuuramee fi hawwameef hojjechuu hanqate. Hanga miila jabeefattuti gaaffii warraaqsichaa hunda deebisuuf kakachuu fi waada sobaan lammiilee biyyaa sossobuu itti fufus, yaaddoo fi komii qaama hundaa gurra dhorkate. Oolee bulee waada sobaa ittiin uummata sossobaa ture faallesuun, bu’uura heeraa fi seeraa gama hin qabneen aangoo dheerefachuu irra darbee, gaaffii Oromoon akka sabaatti gaafachaa, aarsaa kafalaa turee fi itti jiru deebissuurra, dararaa sirna darbe jalatti Oromoo irra ga’aa ture daran gadi jabeessuun caalaatti gidirsuu filate.
Oromoon kaleessas har’as gaaffii wal fakkaataa, kan abbaa biyyummaa, dimokiraasii fi ol aantummaa seeraa waan gaafateef hidhamaa jira. Mootummaan Paartii Badhaadhinaa kan seeraa ala ta’ee fi abbaa irrummaa nam-tokkee jalatti kufe farrummaa sirna darbee ol kaasee lallabuun, gocha yakkaa uummata Oromoo, dhaabbilee siyaasaa oromoo adda duree ta’anii fi namoota beekamoo oromoo irratti raawwatu haguuguuf wixxifachuu malee rakkoo siyaasaa biyyattii mareen furuu, ol aantummaa seeraa mirkaneessuu, fi nageenya waaraa lammiileen itti afuura baafatan gad dhaabuuf fedhii hin agarsiifne. Ragaan kana mirkaneessu hidhaa seeraan alaa kan ilaalcha siyaasaa ho’aa fi aantummaa saba ofii qabaachuu qofaaf hammaatee itti fufee fi gochaaleen gara-jabeenyaa RIB, Pooliisii Federaalaa, Humna Addaa Poolisii Naanno Oromiyaa fi qaamota nageenyaa biroon Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru dha.
Koreen Deggarsa Hidhamtoota Siyaasaa Oromoo(KDHSO) iyyaa fi watwaannaa hidhamtoota siyaasaa Oromoo dhageettii dhabeef sagalee ta’uun kan achi buutee dhabaman iyyaafachuu, madda galii irratti hojetuun abukaatoo seeraa dhaabeefii akka haqa argatan yaaluu, yaala fayyaa akka argatan gargaaruu fi odeeffannoo gama hundaa walitti qabee haala qabatamaa hidhamtoonni siyaasa Oromoo keessa jiran adda baafata. Odeessa argate qindeessee dhaabbilee mirga namooma kan biyyoolessaa fi idila addunyaa, biyyoota addunyaa kan cabinsi mirga namoomaa isaan yaaddessuu fi qaama dhimmi ilaalu hunda qaqqabsiisuun akka mootummaa Itiyoophiyaa irratti dhiibba godhan ni gaafata. Walumaa galatti hiree hidhamtoota siyaasaa Oromoo balaa jalaa hanqisuuf, odeessa qabatamaa dhugaa irratti hundaa’e walitti qabee hamma humni hayyameef ifaajee tarkaanfii seera qabeessaa kan gama hundaa kaayyeffatee hundaa’e milkeessuuf tattaafata. Akka KDHSOn yeroo ammaa odeessa qabatamaa, namoota hidhamanii ba’an, mana hidhaa jiran, maatii namoota hidhamanii fi madda garaa garaa irraa argatetti haalli hidhamtoota siyaasaa Oromiyaa keessaa baayye yaadessaa dha. Magaalaa Finfinnee dabalatee godinaalee Oromiyaa mara keessatti hidhaan hogganaa fi miseensa paartiilee Oromoo karaa nagaa qabsaa’an, namoota bebbeekamoo fi kan hirmaannaa siyaasaa hin qabne hojii idilee ofiitti bobba’an irratti xiyyeeffatee kan yeroo kamii caalaa jabaatee itti fufeera. Haalli qabiinsaa fi mirgi hidhamtootaas dhiittaa hamaa jala jira.
KDHSO barruu kana qopheessuun kan isa barbaachise, hojii kaayyefatee hundaa’e keessaa tokko kan ta’e odeessa gama hundaa hidhamtoota siyaasaa Oromoo ammatti argate, baay’ina gam-tokkee(partial) ta’us, dhiittaa mirga namoomaa hidhamtoota irra ga’aa jiru, haala qabiinsa mana hidhaa qaama dhimmi ilaalu hundaan ga’uufi. Barruun kun afaan Oromoo fi Ingiliffaan qophaa’ee uummata Oromoo, dhaabbilee Oromoo, hawwaasa dipilomaasii Finfinnee maadhefatan, bakka buutota Gamtaa Afirikaa, Awurooppaa, Mootummoota Gamtoomanii, jaarmiyaalee mirga namoomaa biyyoolessaa fi idila addunyaa, Waldaa Fannoo Diimaa Itiyoophiyaa fi Addunyaaf raabsama. Dhugaa hidhamtoota siyaasaa fi dhiittaa mirgaa Oromiyaa keessa jiru akka hubatanii fi dhiibbaa gama hundaa mootummaa Itiyoophiyaa irratti taasiisuun ol-aantummaan seeraa, mirgi namoomaa fi dimokiraasii, sabatiinsi siyaasaa, nagaa waaraan akka gad dhaabbatu ga’ee isaanii akka ba’an waamicha dhiyeessa.
Walumaa galatti, haalli hidhamtoota siyaasaa Oromoo sadarkaa baay’ee yaaddeessaa ta’e irra ga’uu hubachiisaa, haqa akka argatan, hidhaan seeraa alaa fi dhiittaan mirgaa Oromiyaa keessaa akka dhaabbattu qaamni dhimmi Itiyoophyaa nu ilaallata jedhanii fi dhiittaan mirga namoomaa isaan yaaddessu hundi xiyyeeffannoo akka itti kennan akeekna.
Hagayya 7, 2018 guyyaa waliigalteen ABO fi motommaa Itoophiyaa jidduu Eertiraa magaala Asmaraatti tasisameen kan ka’e abdii guddaan hidhaa fi daraaraan ummata keenya Oromoo irraa dhabachuu danda’a jedhamee yaadame ture. Achii as guyyaa simmannaa hooggansa Adda Bilisummaa Oromoo/ABO Fulbaana 15, 2018 kaasee hidhaan oromoo irratti raawwatamaa jiru dubachuuf illee waan nama saalfachiisu fi kanaan dura argamee kan hin beekne. Hanga barruun kun barraa’ee bahutti lammiileen Oromiyaa hidhaan dararaa guddaa argaa jiru. Hooggansi Adda Bilisummaa Oromoo guyyaa gale irraa kaasee ji’oota sadii muraasa booda boqonnaa biraatiin lammilee keenya hidhaan dararuun itti fufe.
Fulbaanaa hanga Sadaasaatti mudannaa guyyaa simannaa Hoggantoota ABO mudate sababeefachuuun lammiilee keenya mana hidhaatti guuruun jalqabame. Hidhamtoota mana hidhaa Finfinnee buufata poolisii 3ffaatti maqaa shororkeessummaan dararamaa jiran keessaa maqaa isaanii muraasni
Eng.Dandii Garbooshee. Finfinnee
Dr.Mohaa Abdiisaa Sh/Lixaa Amboo
Burqaa Kumarraa. W/Lixaa Mandii
Farajaa Getachoo. Sh/lixaa Amboo
Abubakar Abdallaa W/Lixaa
Abbuu Lammaa Sh/Bahaa,Cuqqaalaa
Wagaarii Badhaasaa Q/W/D/Dollo
Lalisaa Guddataa, W/Lixaa Mandii
Shimallis Getachoo Sh/Kabaa/G/Guraacha
Mammad Isaa, W/Bahaa Nunnuu Qunbaa
Abdii Bogoole. W/Bahaa/Naqamtee
Yaadasaa Yooseef. Q/W/D/Dollo
Saadiq Kaliifaa. W/Bahaa Naqamtee
Tarikuu Abdiisaa. Finfinnee
Pro.Bayyanaa Ruuda. Finfinnee
Daraaraa Guyyee. Boorana
Margaa Guutaa. Sh/K/Lixaa
Olaanaa Beellamaa. Sh/K/Lixaa
Kumaa Dandanaa. Sh/K/Lixaa
Takkaalanyi Mardaasaa. Q/Wallagaa
Addunyaa Keessoo. Sh/Kaabaa
Baayisaa Balaayi. Finfinnee
Efireem Iyyaasuu. Q/wallagaa
Gadaa Bultii. W/Lixaa
Bulchiinsa Balaayi. Q/Wallagaa
Falmataa Girmaa. Sh/Kaabaa
Abdii Dirribaa. Q/Wallagaa
Ijoo Fiixee. H/Guduruu
Damee Baacaa. Q/W/D/Dolloo
Abshiruu Kadir. W/Lixaa
Abubakar Nuuree. W/Bahaa
Caalaa Ismaa’el. Finfinnee
Kaliifaa Abdulfattaa. W/Lixaa
Abdii Kumsaa. Sh/Lixaa/Amboo
Firaa’ol Indaaluu. W/Lixaa
Obsaa Fiqaaduu. Finfinnee
Buusaa Jaarrraa. Buraayyuu
Miidhaksaa Baqqalaa. Buraayyuu
Galaanaa Waggaarii. Buraayyuu
Fiixaa Caalaa. Buraayyuu
Gaaddisa Jifaaraa. Buraayyuu
Ababaa Tolasaa. Buraayyuu
Efireem Galataa . Buraayyuu
Yaasoo Kabbabaa. Finfinnee
Ifaa Gammachuu. Finfinnee.
Ittuma fufuun duulli oromoo irratti baname nam tokkee kaasee namoota jumlaan bakka jiranii ukkamsanii hidhuun bal’inaan jabaatee itti fufe. Dubree Sittiinaa Yilmaa magaalaa Gullisoo keessaa ukkaamfamtee hidhamte dabalatee Kaaba Shaggar Aanaa Dagam keessaa namoota hedduu ABO deeggartu jedhamanii mana hidhaatti guuraman:
Obbo Girmaa Shawaa (Jaarsa Biyyaa )
Obbo Girmaa Turaa (Manguddoo)
Barsiisaa Dajanee Fiqaaduu
Obbo Taganuu Hordofaa -Hojjetaa Mootummaa
Obbo Alamaayyoo Addunyaa -Q/bulaa
Obbo Warquu Raggaasaa -Bulchaa Gandaa
Barsiisaa Yirgaalam Pheexiroos
Barsiisaa Lammaa Fayyisaa
Barattuu Hayimaanot Lammaa
Qeerroo Hayiluu Dabalee
Obbo Ashannaafii Hayilu – Hojjetaa Mootummaa
Akkuma cuunfaatti Hidhamtoota 108 Fulbaana 15, 2018 booda walitti bu’insa Buraayyuu irratti ta’e sababeefachuun kanneen jumlaan qabamuun hidhaman saba kana gabrummaa akka haaraatti irratti labsame agarsiisa:
Guddisaa Mararaa Fufaa
Addunyaa Ambassaa Ayyaanaa
Badiruu Kumsaa Miijanaa
Dhaabaa Girmaa Geeddafaa
Awwal Abbaazinaab Abbaagaroo
Tarreessa Margaa Goshuu
Urgeessaa Gabbisaa Dabalaa
Ebbisaa Caala Haayiluu
Tigist Taarraqee Tarrafa(Dha)
Geexee Nagessaa Caalaa(Dha)
Zarihuun Guuttataa Bariisoo
Takkaaliny Mul’ataa Wayyeessaa
Dagguu Ballaxaa Haayilee
Maccaa Jiraataa Bulchaa
Meetii Faanaa Raggaasaa(Dha)
Dalasaa Dhugumaa Sobbooqaa
Maammush Qana’aa Haayilee
Haacaaluu Bulchaa Qorichee
Girmaa Baqqalee Raayyaa
Birhaanuu Lammii Jootee
Magarsaa Kaasaayee Guutaa
Rattaa Raggaasaa Disaasaa
Zamanuu Guutaa Dhihoo
Caalchisaa Abarraa Baqqaanaa
Masfin Mulgeetaa Taayyee
Sorgaantii Disasaa Guutaa(Dha)
Waamii Gammadoo Galataa
Haayiluu Galaanaa Geeddafaa
Taaddasaa Camadaa Naggasaa
Addisuu Dachaasaa Eebbisaa
Bareechaa Kabbadaa Guutaa
Kinfee Taaddasee Birruu
Tolaa Gammachuu Urgaa
Gaaddisaa Birhaanuu Cuukkoo
Abbabuu Gammachuu Fayyisaa(Dub)
Taganuu Gosee Arfadee
Baay’isaa Miidhaksaa Fayyissa
Habtaamuu Magarsaa Qalbeessaa
Baqqalaa Warquu Jimmaa
Baqqaanaa Zawudee Barii
Amantee Lammaa Naggaa
Dabalaa Lammaa Naggaa
Lammaa Naggaa Intalee
Dabaluu Badhaadhaa Kumbii
Birqee Raggasaa Badhaadhaa(Dub)
Naannoo Dassuu Beenyaa
Abdataa Balaachoo Birruu
Tarreessaa Diriirsaa Hordofaa
Biraanuu Itichaa Dabalaa
Darajjee Dirrubaa Dabaluu
Inj Seefuu Damissee
Inj Tashoomaa Daadhii
Araarsaa Kursaa Cunqursaa
Mabiraatuu Dajanee Maammoo
Inj Bahiruu Onchoo
Girmaa Tashoomaa Baay’isaa
Makibab Shifarraa Getaachoo
Irgoo Lammaa Warquu(Dub)
Mitikkee Tufaa Sinichoo(Dub)
Haayilemikaa’el Taaffasee Tasammaa
Alem Taffasee Tasammaa
Charinnat Taffasee Tasammaa
Asmaree Abbabee Tasammaa
Fiqaaduu Haayilee Badhaanee
Darajjee Naannoo Aderaa
Hirphasaa Galaanaa Mul’ataa
Tasammaa Galaanaa Mul’ataa
Iziraa Ifireem Dhangaasaa
Fireehiwot Kennaa Laggasee(Dub)
Galaanaa Adaraa Sanbataa
Lataa Baqqalaa Deebisaa
Kabbadee Fayyisaa Badhaasaa
Maammush Baqqalaa Deebisaa
Mul’attuu Obsaa Waayyuu
Baay’isaa Guddataa Fufaa
Tolashii Ayyaansaa Kumbii(Dub)
Almaaz Araarsaa Fayyisaa(Dub)
Jifaaraa Beksisaa Qaabataa
Laggasee Jimma Tasammaa
Ilmaan Oromoo maqaa isa duri ittiin dararamaa ture SHORORKEESSUMMAA deebisanii itti maxansuun, Abbaa fi Ilma, Manguddoo, Hayyotaa, Qeerroo, hogantoota dhaaba ABO fi kkf guruun otoo mana murtii hin dhiyeessiin bakkoota adda addaa maikelaawwii cufameera jedhanii kijibaa turan keessatti dararaa jiru.
Kol Gammachuu Ayyaanaa
Saajiin Ungulaa Baqqalaa
Inispeekter Dorombos `Cuukkoo
Saajiin Wadajoo Malkaamuu
Huseen Alii Hasan
A/Dhi Hasaan Ali I/G/Nageenyaa fi I/A/Bulchaa Jillee
Ali Yimeer Inspeekter poolisii
M/d Ammee M/d
A/Dhk Husseen Hajii
Umar Abduu Umar
Hasaan M/d Darasoo
Umar Adame Aliyyii
Usumaan Hasaan Bayaan
Bushuraa Mammud Baaqalaa
M/d A/d Sawwali 1 /10/2011 kan qabamee
A/Dhi Ibrahim B /A/ CAFFAA
Maammee Aliyyii M/d I/G /Nageenyaa
Ibraahim Aliyyii I/I /Nageenyaa
Fayyera Oljiraa H /Fayinaasi
Kifoo (Guddataa) H/Galiiwaani
Huseen Ali Affaaree B/Gandaa
A/Dhi Mohammed Milishaa gandaa
Umar Kabiir ( Kaliil)
Hasan Jibriil M/gandaa
Adam Huseen M/d
Husseen M/d Inspeekter poolisii
Xilaahuun poolisii M /Marii
Maammud Muhee (sarboo) milishaa gandaa
M/d Husseen M/d milishaa gandaa
Hasuu A/d Badruu
A/d Yimaam Sayid
M/d Sayid Muhee
Muhee Sayid Fulee
Goonfee Husseen Hasaan
Ali Mootummaa K /M/ Kamisee
Sayid Hasaan ( Mandelaa)
Dr Dinqiisaa Qannoo Barsiisaa Yunivarsiitii Wallaggaa
Dheekkamaa Muuda Barsiisaa Yunivarsiitii Bulee Horaa
B/sa Adabaa Ayyaana
Dargaggoo Seefuu Amanuu Aliyyaa
Aadde Asaggadech Taammanaa haadha faarmaasii
Barsiisaa Suutumaa Bantii.
Obbo Birruu Wayyeessaa
Karaa tokkoon waa’ee nagaa haasawaa, karaa biraan ammoo hidhaan jumlaa bal’inaan Oromoo irratti deemsifamuun yaada wal hin simnee fi walii faallaati. Duulli kun daddaffiin dhaabbachuu akka qabu hayyonii, sab-boontotni Oromoo fi qaamni dhimmi ilaallatu watwaatan illee bu’aan ykn fooyyeen tokko otoo hin argamiin, waliigalteen dhaaba ABO fi Motumman Itiyoophiyaa waggoota lakoofsisee jira.
Kuni kanaan otoo jiruu duulli hidhaa Godinoota Oromiyaa hedduu keessatti sab-boontota Oromoo, ABO deeeggartu ykn miseensa ABOti jedhaman irratti gaggeessamaa jiru karooraan bu’aa siyaasaa karaa hadhabaaf yoo ta’u itti ba’i isaa biyyattii silumaa daaqama siyaasaa hamaa keessa galte gara sirna dhabdummaa walii galaatti akka hin oofne nama yaaddessa.
Daraaraan uummata bal’aa irratti gageefamu akkuma itti fufetti otoo jiruu waggaa tokkoo booda dhaaba ABO karaa nagaa biyya keessatti qabsoo akka gageessu boordiin filannoo beekamtii kenneefi, dhaabichisi gamachuu isaa akka armaan gadiin ibsate.
(ABO Sadaasa 15, 2019)
Kabajamaa Ummata Bal’aa Oromoo, Kabajamtoota Sabaa fi Sab-lammootaa fi Ummatoota Itoophiyaa hundaa, Firoota Qabsoo Oromoo fi Nagaa jaallattoota Hawaasa Addunyaa hundaa, Hundaan olitti ammoo miseensotaa fi deggertoota Dhaaba keenya ABO hundaaf,
Baga Gammaddan ! Baga Gammadne!
Guyyaa har’aa Sadaasa 15, 2019 Addi Bilisummaa Oromoo Boordii Filannoo Biyyoolessaa Itoophiyaa irraa Seera-qabeessummaa isaa kan mirkaneessu waraqaa ragaa argachuu isaa gammachuu guddaadhaan labsina, jechuudhaan ibsan. Mee adeemsi jiru yoo xiqqoo fooyya’e jedhamee otoo eegamuu hameenyi itti fufe.
Olee otoo hin buliin, moottuummaan aangoo siyaasaa kara shiraa gad-jabeefachuu malee egeree biyyaaf abjuu akka hingochaa mirkanneessuu dalagu itti fufuusaan, sochiin barattootaa akka haaraatti gamaa gamasii dhohe. Barattoota hidhuun barumsa irraa ari’uun fi ajjeesuun akkasumas dhaabni ABO karaa nagaa qabsaa’u akka ititee gara hojii siyaasaatti hin seenne miseensotaa fi hoggana hidhuu dabalatee shirri gara garaa irratti oofamu jabaate itti fufe. Haalli biyya keessa jirus daran yaaddessaa ta’aa dhufe. Warreen qabaman marsaa galmee adda addaa jalatti qindeessuun maqaa kana kakatanii abaaran shoreerkeessumaa itti moggaasuun miseensota, hoggantootaa, deggartootaa fi jaallattoota dhaaba ABO karaa nagaa qabsoo geggeessuu sobaa fi shiraan yakkuun himannaa irratti banuun farrrummaan Sabboonnummaa Oromummaa dhabamsiisuu, yoo dadhabamee quucarsuu kaayyeffate gama mootummaan hammaachaa deemuu jalqabe.
Hidhamtoota Garee 1ffaa:
Hayilamikaa’el Taaffasaa Tasammaa
Alam Taaffasaa Tasammaa
Charinnat Taaffasaa Tasammaa
Asmaraa Abbabaa Tasammaa
Fiqaaduu Haayiluu Badhaasaa
Darajjee Naannoo Adaraa
Hirphaasaa Galaanaa Mul’ataa
Azer Ifireem Daangisaa
Firaa’ol Qana’aa Laggasaa
Tasfaayee Mukuruu Saalee
Waaqtolaa Abarraa Sambataa
Kabbadaa Fayisaa Deebisaa
Mulaatuu Obsaa Wayyaa
Baayisaa Guddataa Fufaa
Tigisti Tasfaayee Kumalaa
Tolasaa Ayyaansaa Qumbii
Galaanee Geetaahun Xaafaa
Almaaz Araarsoo Fayisaa
Jifaaraa Bookkisaa Qaabataa
Hidhmtoota Garee 2ffaa Qilinxoo:
Gaaddisaa Mararaa Fufaa
Addunyaa Hambisaa Ayyaanaa
Bojaa Addunyaa Abdii
Awwal Abbaazinaak Abbaagaroo
Badiruu Kumsaa Mugannoo
Tarreessaa Margaa Gaashaa
Dhaabii Girmaa Gaddafaa
Darajjee Hirphaa Gammachuu
Urgaa Gabbisaa Dabalaa
Eebbisaa Caalaa Hayiluu
Tigisti Taarraqaa Tafarraa
Geexee Nagaasaa Caalaa
Takkaalliny Mul’ataa Wayyeessaa
Dagguu Ballaxaa Hayiluu
Meetii Faanaa Boggaalaa
Amansiisaa Bojaa Iddattoo
Kabbadaa Doorsisaa Filataa
Maammush Qana’aa Hayiluu
Haacaaluu Bulchaa Qorichoo
Girmaa Baqqalaa Raayyaa
Biraanuun Lammii Jootee
Magarsaa Kaasahee Guutaa
Rattaa Raggaasaa Deesisaa
Hidhamtoota Garee 3ffaa Qilinxoo:
Kinfee Taaddasaa Birruu
Gaaddisaa Biraanuu Cuukkoo
Abbabuu Gammachuu Fayyisaa
Taganuu Gosee Hordofaa
Baay’isaa Miidhaqsaa Fayyisaa
Haftaamuu Magarsaa Qalbeessaa
Baqqalaa Warquu Jimaa
Baqqalaa Zawudee Barii
Amantee Lammaa Nagawoo
Dabalee Lammaa Nagawoo
Lammaa Nagawoo Intalee
Dabaluu Badhaadhaa Qumbii
Birqee Raggaasaa Badhaadhaa
Darajjee Dirribaa Dabaluu
Komaander Seefuu Damisee Fayyisaa
Inispekter Tashoomaa Daadhii Waaqee
Araarsoo Koorsaa Cunqursee
Maabiraatuu Dajanee Maammoo
Inispekter Baahiruu Oonchoo Birruu
Girmaa Tashoomaa Baayisaa
Maayikibab Shifarraa Geetaachoo
Urgoo Lammaa Warquu
Mitikkee Tufaa Sanyii//
Beekamtiin seerawaa karaa bordii filannoo guyyaa sadaasaa 15, 2019 booda immoo sochii ABOn karaa nagaa socho’ee dargaggoota ijaaree siyaasa isaa gaggeessu sodaaf, jidduu gala Oromiyaa keessatti akka armaa gadii kanaan hidhaa jumlaan raawwatee jira.
Buraayyuu nama . 200
Sabbataa nama …56
Xaafoo nama 24
Sulultaa nama 15
Shaggar Lixaa nama 58
Iluu Abbaabooraa nama 40
Beddellee nama 20 ol
Jimmaa nama 30 ol
Naqamtee nama 50 ol
Gujii nama 40
Boorana nama 20 ol
Harargee nama 40 ol
Haala hidhaan hammaatee itti fufuu kana Addi Bilisummaa Oromoo/ABOn ibsa hidhaa Oromiyaa keessatti raawwachaa jiru akka armaan gadiitti kenne.
Ibsa Gaazexaa Adda Bilisummaa Oromoo Irraa:
Hidhaan Jumlaa (Mass Arrest),
Ajjeechaan Namoota Meesha-maleeyyii, Ummata Addaa Qoodanii Tajaajila Quunnamtii Irraa Kutuun, Barattoota Addaan Qoodanii Barnoota Irraa Ari’uu, Bulchiinsi Waraanaa (Command Post) bu’uura seeraa hin qabnee fi Walumaa galatti Hacuuccaan Siyaasaa Jal-bultii Filannoo Biyyoolessaa Itoophiyaa Kan Bara 2020tti, Oromiyaa Irratti Babalachaa Jiru Guddoo Nu Yaaddessa! 7
Yaaddoo sirna dhablummaan baballachuu fi ol aantummaan seeraa dhabamuu akkasumas dhiittan mirgaa jabaatee itti fufuun, egeree biyyatti balaa hamaa fi irraa dandamachuun ulfaatu keessaa akka hin galchine irratti qabu ABOn nuffii malee jabaatee akeekachiisuu fi hubachiisuu itti fufus mootummaan Itiyoophiyaa furamaata walii galaaf gad taa’ee mari’achuu irraa karaa humnaa furuu filate. Humna harkaa qabu gargaarame hidhaa, reebichaa fi ajjeechaa bal’aa miseensotaa fi deggertoota dhaaba ABO karaa nagaa qabsaa’uu fi hawwaasa nagaa irratti, bal’inaan Oromiyaa keessatti waggoota lamaan darban raawwatame caalaa ragaan kana mirkaneessu hin jiru.
Addi Bilisummaa Oromoo mootummaa Itoophiyaa wajjin waliigaltee araaraa irra gahuudhaan biyya kana keessatti Bilisummaa Ummatootaa fi ijaarsa sirna dimokiraasii dhugoomsuuf sochii siyaasaa karaa nagaa erga jalqabee waggaa tokkoo ol tahee jira. Erga waraqaa ragaa seera-qabeessummaa Boordii Filannoo Biyyoolessaa Itoophiyaa irraa argatee garuu reefuu baatii 3 guuta. Yeroo dabarsine kana keessatti gama mootummaa fi Paartii biyya bulchuutiin dhiibdeen siyaasaa hin barbaachisne nu irra gahaa turuu yeroo adda addaatti sagalee keenya dhageessifachaa turuun keenya ni yaadatama. Kanuma waliin dhiibbaa bifa gara garaatiin nu irra gahaa ture hundaa obsaa fi bilchinaan qabnee mootummaa fi paartii biyya bulchus tahe qaamota dhimmi ilaalu hunda waliin mariidhaan furmaata itti barbaadaa as geenyee jirra.
Rakkinoota siyaasaa jiraniif furmaata irra wayyaa tahuu kan danda’u filannoo haqaa fi dimokiraatawaa kan Uummatni bilisa tahee bakka bu’oota isaa sadarkaa hundaatti filatu gaggeessuudha jennee waan amannuuf Filannoon Biyyoolessaa Itoophiyaa kan bara 2020 inni fuula keenya dura jiru filannoo akkasii akka tahuuf qooda gama keenyaa bahachuuf hojjechaa turre ammas itti jirra. Akkuma beekamu Boordiin Filannoo Biyyoolessaa Itoophiyaatis Filannoo bara kana gaggeeffamuuf jiruuf tartiibaa fi sagantaa yeroo hojiileen filannoo kanaa itti xumuramuu qaban (Election Time Table) ifa godhee jira. Yeroo saganteeffame kana keessatti qophii nu irraa eegamu hunda xumurannee Filannoo kanatti hirmaachuuf gama keenyaan waan gochuu qabnu hundaa gochaa kan jirru tahu illee rakkoon gama mootummaatiin miseensotaa, deggertoota hogganaa fi uummata keenya irra geessifamu garuu guyyaa irraa gara guyyaatti hammaachaa, fi babal’atee deemuun itti fufee jira.
Rakkinoota nu mudachaa jiran gabaabsinee (walitti cuunfinee) yoo keenye:
Godinoota Oromiyaa kanneen akka Qellem Wallaggaa, Lixa Wallaggaa, Horro-Guduruu Wallaggaa, Baha Wallaggaa, Baha Gujii, Lixa Gujii, Boorana, Buunoo-Beddellee, fi Iluu Abbaa Booraatti Ummatni keenya yeroo waggaa tokko caaluuf Bulchiinsa Waraanaa (Command Post) seeraan hin labsamin jala jira.
Lafoota bulchiinsa waraanaa (Command Post) jala jiran kana hundattuu bilisummaan sochii mirgi lammiilee daangeffamaa tahuutti dabalee godinoota akka Qellem Wallaggaa, Lixa Wallaggaa fi Godinoota Gujii lamaan keessatti lola sababa godhachuudhaan ajjeechaan, hidhaan, saaminsi, manaa fi qabeenya ummataa gubuu, balleessuun fi kkf. lammiilee nagaa (meesha maleeyyii) irratti gaggeessuun kan yeroo kamuu caalaa hammaatee jireenya uummata keenyaa gidiraa hamaa keessa galchee jira. Hundaa olitti ammoo Godinoota lamaan Qellem Wallaggaa fi Lixa Wallaggaa irraa mootummaan tajaajila qunnamtii akka telefoonaa fi interneetii guutummaatti erga kutee baatii 1 fi walakkaa caalee waan jiruuf yeroo kana keessatti waan naannoo sanatti tahaa jiru beekuun dadhabamee jira. (Dhimma kana ilaalchisuudhaan jalqaba baatii kanaa gaafa Gurraandhala, 1, 2020 Ibsa baasuun keenya ni yaadatama). Haa tahu malee haalli sun ammas akkuma itti fufetti jira. Yeroo ammaa kanatti ammoo rakkinni tajaajila qunnamtii bilbilaa fi interneetii kutuun, Finfinnee irraa gama Dhihaa fi kibba Oromiyaatti sochii hawwaas-dinagdee uummata keenya gamas jiran gaadiuun rakkina haamaaf isaan saaxilan.
Rakkinni bulchiinsa waraanaa (Command Post) seeran alaa haala kanaan osoo jiruu, dhiheenya kana ammo godinoota Oromiyaa bakkoota hedduu keessatti sababaa nuti hin beekneen hidhaan jumlaa (mass – arrest) miseensotaa fi deggertoota dhaaba keenyaa irratti bal’inaan gaggeeffamuu jabaatee itti fufee jira. Qaamni hidhaa jumlaa kana gaggeessaa jiru Poolisii Oromiyaa tahuunis beekamee jira. Hidhaan jumlaa kun, Godina Addaa Naannawa Finfinnee jedhamuun beekaman keessattis haala yaaddessaa ta’een adeemaa jira. Akka kanaan torban tokkoo asitti qofa miseensotaa, deggertoota, fi jaallatoota dhaaba keenyaa kanneen bakkoota addaa addaatti(Godinoota Oromiyaa 7, Onootaa fi Bulchiinsa Magaalaa 26) irraa jumlaadhaan hidhaman keessaa yoo xiqqaate kan odeessi isaanii hanga ammaatti nu dhaqqabe lakkoobsi namoota 350. Haa tahu malee, sababa uggura quunnamtii fi bakka dhoksaa mana hidhaa idlee hin taneetti hidhaan raawwatuuf, odeessa gahaa wallitti qabuun dadhabamus baayyinni hidhamtoota kun kumoota akka ta’u amanna. Kanneen hanga ammaatti tarrisa maqaa isaanii gama garaa garaan qabatammaatti arganne, namootni 174 kanneen armaan gadii tahu:
I. Godina Addaa Naannawaa Finfinnee Sabbataa Irraa: Namootni 56 hidhamuu kan mirkaneeffanne oggaa tahu kan maqaa isaanii arganne:
Obboo Caalaa Sardaa Manguddoo biyyaa
Obboo Tashoomaa Biqilaa Manguddoo biyyaa
Obboo Angaasaa Garasuu Manguddoo biyyaa
Buraayyu Irraa: Namootni hidhaman lakkoofsaan 150 ol oggaa tahan kan maqaan isaanii nu dhaqqabe
Hiikaa Bulchaa Dabballee Waajjira ABO
Malkaamuu Gammachuu Barsiisaa
Qabbannaa Ittafaa Mana cufsiisanii Maatii waliin hidhan
Xaafoo Irraa: Namoota 24 hidhamuu mirkaneeffanne keessaa maqaan namootaa arganne
Magaalaa Caancoo Irraa: Namootni hidhaman hedduu tahanis maqaan ammaaf arganne
II. Godina Lixa Shawaa Magaalaa Amboo Irraa: Namoota hidhaman keessaa kan maqaan nu dhaqqabe
Barsiisaa Tasammaa Hambisaa
Baakkoo Tibbee Irraa:
Adaaa Bargaa Irraa:
Kabbadaa Irkoo Barsiisaa
Gammadaa Tashoomaa Barreessaa Waajjira ABO
Tasfaayee Hordofaa Miseensa
III. Godina Kaaba Shawaa Dagam Irraa:
Ejeree Irraa: Namootni 17 hidhamuu mirkaneeffannus maqaan isaanii nu hin dhaqqabne. Abuunaa Gindabarat Irraa: Namootni 5 hidhamuu mirkaneeffannus maqaan isaanii nu hin dhaqqabne.
IV. Godina Horroo-Guduruu WallaggaaAmuuru Irraa:
Barsiisaa Tasfaa Toleeraa
Abbaay Coomman Irraa:
Baayisaa Guddallee Reebicha hamaan kan miidhame
V. Godina Iluu Abbaa Booraa Daarimu Irraa:
Yunivarsitii Mattuu Irraa:
Alii Hajii Jaarsoo
Haluu fi Noophaa Irraa:
Magaalaa Mattuu Irraa: Namoota hidhaman keessaa kan maqaan nu dhaqqabe
Barsiisaa Daagim Warqinee barreessaa waajjira ABO Mattuu
VI. Godina Baalee Magaalaa Roobee Irraa:
Dalloo Mannaa Irraa:
Aliyyii Mohaammad Haajii
Huseen Sheek Ahmad
VII. Godina Lixa Harargee Irraa: Ona Gammachiis Irraa:
Jamaal Nuuraa Indiree G/Waajjira ABO
Odaa Bultum Irraa:
Aadde Shaashii Saadiqoo
Abdoo Siraaj I/A/Waajjira ABO
Toofiq Aliyyii Abdii
Godina Lixa Harargee Ona Doobbaa magaalaa Biyyoo Karaabaatti Gaafa 10/02/2020tti poolisootni Oromiyaa dargaggoota hedduu jumlaan reebuudhaan miidhaa gurguddaa irraan gahanii, waajira ABO kan magaalaa kanaatti argamus cufanii jiran. Odeeffannoon kun deggertoota, miseensotaa fi qondaalota dhaaba keenyaa kanneen duraan Finfinnee fi iddoo adda addaatti hidhamanii jiran hin dabalatu. Rakkoolee nu mudataa jiran kanneeniif furmaata barbaaduuf yeroo adda addaatti boordii filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa xalayaadhaan beeksisuutti dabalee qaamota mootummaa dhimmi ilaalu waliinis waltajjiilee carraan itti argame hundatti wal hubannoo feesisu uumuuf gama keenyaan of qusannee hin beeknu.
Yeroo ammaa kana jal-bultii filannoo biyyoolessaa kan bara 2020 irra jirrutti Oromiyaa keessaatti rakkooleen turan furamanii, haalli nageenyaa fi bilisummaan sochii humnoota siyaasaas tahe kan lammiilee hundaa wayyoomina agarsiisaa deemuun hafee daran hammaachaa deemuun sadarkaa kana gahuun isaa yaaddoo guddaa nutti dahlchee jira. Ta’us, ammas osoo abdii hin kutanne irra deddeebinee gaafatamni guddaan kan irra jiru mootummaan rakkina kana babal’isuu dhiisee furmaata itti barbaaduuf akka hojjetu jabeessinee gaafanna. Kanaaf akka gargaaruufis:
Hidhaan jumlaa kun hatattamaan akka dhaabbatu
Kanneen hidhamanii jiran hundi mirgi isaanii kabajameefii hatattamaan karaa haqa-qabeessa taheen murtii seeraa akka argatan
Tajaajilli quunnamtii yeroo dheeraaf addaan muramee wal qunnamtiin uummataa dhabamuun uummata dheekkamsiisee miira aariitiin gara hin feesisnetti dhiibuu waan danda’uuf tajaajilli qunnamtii murame dafee akka bakkatti deebi’u
Bulchiinsi Waraanaa (Command Post) seeraan hin labsaminii fi yeroon itti xumuramus hin beekamne uummata keenya gidiraa hamaaf saaxilee waan jiruuf hatattamaan akka kaafamuu fi ajjeechaan lammiilee nagaa (meesh-maleeyyii) irratti gaggeeffamaa jiru hatattamaan akka uummata keenya irraa dhaabbatu
Boordiin Filannoo Biyyoolessaa Itoophiyaa kallattiidhaan gaafatama filannoo biyyoolessaa itti deemnu kana fiixaan baasuuf, haala gufachiisaa jal-bultii filannichaatti mul’achaa jiru kana qaamota dhimmi ilaalu hunda waliin hojjetee furmaata argamsiisuuf gaafatama isaa akka bahatu
Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa dhiittaa mirga namoomaa fi dimokiraasii Oromiyaa keessatti bal’inaan gaggeeffamaa jiru kana hordofee qorachuun gabaasaa barbaachisu dhiheessuutti akka hin jirre argaa jirra. Qaamni kunis gaafatama seenaa jalaa bahuuf gahee irraa eegamu akka bahatu
Mootummoonni biyyootaa, kanneen michuu Itoophiyaa warri dimokiraasiin biyya kana keessatti akka lafa qabatuuf tiniinsa adda addaa gochaa jiran haalli Itoophiyaa keessatti deemaa jiru kan karaa irraa jallatee fi faallaa dimokiraasii waan taheef mootummaa Itoophiyaa gorsuu fi dhiibbaa ijaaraa feesisu hunda gochuudhaan haalli kun akka sirrattu taasisuuf gahee isaanii akka bahatan yaadachiisna.
Komishiniin sadarkaa Afrikaatti qabaa mirgoota dhala namaa fi Ummatootaa hordofu (African Commission on Human and Peoples Right) akkuma biyyoota Afrikaa biroo irratti hordoffii taasisu adeemsa faallaa dimokiraasii Itoophiyaa keessatti babal’achaa jiru kana hordofuudhaan akka gabaasuu fi qooda isa irraa eegamu akka bahatu yaadachiisna.
Mootummaan Itoophiyaa haala karaa irraa jallatee biyyattii gara hin taanetti dhiibaa jiru kana osoo tohannoodhaa ala hin baane tarkaanfiin sirreessaa akka fudhatamuuf irra deebi’ee keessaa ofii akka ilaalu. Rakkinni jiru kamuu qaamota dhimmi ilaalu hunda haala hirmaachiseen mariidhaan furmaata akka argatuufis akka haala mijeessu cimsinee gaafanna.
Oromiyaattis tahe guutuu biyyaatti nageenyaa fi tasgabbiin uumamee filannoo biyyoolessaa kan bara 2020 fuul-dura keenya jiru irratti uummatni bilisa tahanii bakka bu’oota isaanii filachuudhaan mootummaan uummataa akka hundeeffamuuf mootummaa aangoo irra jiru dabalatee kanneen dhimmi ilaalu hundi gaafatama isaanii akka bahannu waamicha goona.
Qaamotni adda addaa kanneen rakkinoota mul’atan kana hubachiisuu fi furmaata argamsiisuu keessatti qooda kennuu dandaan (Dhaabbattootni mirga dhala namaaf falman kan olitti maqaa dhawamanii kan kanneen biroos, miidiyaalee fi gaazexeessitootni, namootni fi qaamotni dhiibbaa ijaaraa gochuu danda’an) hundi haala kana fardeessanii akka jala bu’anii fi karaa ijaaraa taheen gahee isaanii akka bahatanis cimsinee gaafanna. Addi Bilisummaa Oromoo gama isaatiin rakkinoonti jiran hundi furmaata waaraa akka argataniif waan isa irraa eegamu hunda kan godhu tahuu mirkaneessina.
Injifannoo Ummata Balaaf !
Gurraandhala 14, 2020
Ibsa Addi bilisummaa Oromoo/ABOn basee torbee lamaa booda Muddama hamaa keessa Motumaan seenuusaarraan kan ka’e tarkaanfii garaa jabummaa guyyaa Guraandhala 29, 2020 Hogganoota ABO 10(kudhan) ajaja mana muurtiin ala hidhaman:
Dr Shuggux Galataa
Gochi kun yeroo gabaabatti adunyaa waliin gahee dhiibba cimaan Motummaa irratti godhamus adeemsa isaa irra otoo hin dhaabbatiin poolisiin magaalaa Buraayyuu qondaalota fi hooggantoota ABO jaal Abdii Raggaasaa gaafachuu deeman qabee hidhe:
Mohammed Hassen Waaqoo
Yeroon isaa dhukubni Koronaa yerootti babalachaa jiru waan ta’eef Abbaan Alangaa Federaalaa hidhamtoota 4000 caalaniif dhiifamni godhameef. Haa ta’u malee, dhiifamni kun miseensota ABO hin dabalanne.
Walumaa gala adeemsi hidhaa batiilee Amajjii, Guraandhalaa fi Bitooteessa akka malee hammaataa turuurraa kan ka’e kan hidhameef kaan hafe hanga addaan wallaaluu gahameera. Diraamaan isaa itti fufuun kenneen mana murtii dhiyaatanii yeroo lama sadii bilisa jedhaman illee gadhiisu diduun gara abba irrumaa hamaatti seenamee jira.
Hidhaa suukanneessaa Gujii Bahaatti raawwate Galamoo Dawit Gaazexeessaan VOA Eebila 21, 2020 karaa VOA akka armaan gadiitti gabaase.
Maatii Shanee jedhanii walitti nu qabaa jiru Jiraattota Gujii Bahaa Maatii Shanee Jedhanii Walitti nu Qabaa Jiru Gujii Bahaatti Warri Torbee Darbe To’annaa Jala Oolfames Dhaddachaaf hin Dhiyaanne jedhu Jiraattonni
Torbee darbe Gujii Bahaa aanotii gammoojjii afur keessaa poolisii Oromiyaan ka to’annaa jala oolfaman mana murtiif akka hin dhiyaanne jiraattonni Sagalee Ameerikaaf dubbatanii jiran. Firoottan warra hidhaman kanaa, Sagalee Ameerikaaf yoo himan bakka waajjira poolisiittillee firoota isaanii gaafachuu sodaanneerraa jedhan. Aadde Darmii Tukkisee jiraattuu aanaa gumii Eldalloo, ganda Caffee Hiddiiti. Aadde Darmi abbaan warraa isaanii miseensa warra maqaa WBOn socho’u ta’uu firri isaanii tokko Sagalee Ameerikaatti himanii jiran. Torbee darbe waldhaansa baqaqsanii hodhuun erga daa’ima da’anii booda humna nagaa kabachiiftota mootummaan to’annaa jala oolfamanii Guyyaa afuriif daa’ima waliin waajjira poolisii Magaalaa Nageelle jiruu jedhu firri isaanii kun. Dabalaniis yoo dubbatan firri Aadde Darmii poolisii waan sodaanneef waan nyaatamuu fi uffatallee ijoolleedhaan waajjira poolisiitti erginaaf jechaaan himan. Ammas warri yeroo mootummaan torbee darbe kanaa kaasee nageenya kabachiisuuf tarkaanfii fudha jedheka to’annaa jala oolan marti mana murtiif hin dhiyaanne jedhu jiraattonni Gujii Bahaa. Jiraataan waa’ee warra qabamee VOAf himan kaanis dubartoonni hoosisan 10 ol Waajjira Poolisii Magaalaa Nageellee keessa jiraachuu dubbatnii jiran.
Waa’ee warra hidhaman maaf akka mana murtiif hin dhiyaanne gaafattanii deebii maal argattanii jedhee firoottan namoota hidhamanii gaafatamanii yoo deebisan, dargaggoonni gaaffii akkasii kaasuun yakka ta’eera baayyee sodaannaa jedhu.Gama biraan ammas jiraattonni Gujii Bahaa keessumaa maatii warra bosona jiruutii jechaan nu shakkanii bakka tokkotti walitti nu qabaa jiruu jedhu. Akka jiraattonni jedhanitti miseensonni poolisii Oromiyaa fi humnootni naga kabachiiftota mootummaa Gujii Bahaa keessaa bakka lamatti Maatii Shanee jechuun maatii warra hidhannoon naannoo keessa socho’uu walitti qabaa jiru.
BBC Affaan Oromoos guyyaa Eebla 24, 2020 Hidhaa naanno jimmaa irratti tasifamaa jiru haalab armaan gadii kanaan gaabaase.
“Jimma Saqqaatti kan hidhaman Obbo Abdoo Abbaa Joobir eenyu? MADDA SUURAA, MIIDIYAA HAWAASAA Suuraan Obbo Abdoo Abbaa-Joobir harki isaanii duubatti hidhamee humnoota nageenyaa mootummaan marfamanii yeroo deeman agarsiisu miidiyaalee hawaasummaa irratti ijoo dubbii ta’eera. “Waaree booda sa’aa 11:30 irratti dhufanii mana keenya marsan. Isa boodas balbala rukutanii ol nutti seenanii harka isaa dudduubatti hidhanii reebaa fudhatanii deeman,” jedhu haatii warraa Obbo Abdoo Abbaa-Joobir Addee Jamiilaa Abbaa Raayyaa.
Namni kun eenyu? Maalif qabaman? Obbo Abdoo Abbaa Joobir godina Jimmaatti jiraataa aanaa Saqqaa Coqorsaa, abbaa ijoollee sadiifi hojjettaa Waajjira Barnootaa aanichaati.
“Haala ture ibsuun nama rakkisa. Fiilmii hojjechaa kan jiran malee nama tokko qabuuf kan dhufan hin fakkaatu. Mooraan keenya polisootaan guutameera,” jedhan haala Addee Jamiilaa haala ture yeroo himan. Akka haati warraa isaanii BBC’tti himanitti Obbo Abdoon miseensa dhaaba kamiyyuu miti. “Aanaa kanatti ‘ideology’ warra aanaa yoo hin hordofne yookin ammoo soba isaan sobaniif dhuguma jettee yoo duukaa hin deemne, yoomuu ati mormituudha,” jechuun abbaan warraa isaanii ilaalchuma qaban qofaaf hidhamuu isaanii himu Aaddee Jamiilaan.
Guyyuma walfakkaataa Roobii obboroo manni isaanii marfamee abbaa fi obboleessi isaa humnoota nageenyaan akka fudhataman kan himu jiraataan aanaa Saqqaa Coqorsaa dargaggoo Arabuu Kaliifaa “nuyi siyaasa keessatti hirmaannaa hin qabnu, sabboonummaa fi quuqama uummataa qabna. ABO wajjin hidhata qabdu nun jedhu,” jedha. Dargaggoo badii poolisiin Finfinneetti raawwatu waraabe ‘Mootummaan sarbama naannoo Somaalee gadi fageenyaan qorachuu qaba’ ‘Qorannoo sarbama mirga namoomaa tarkanfii itti aanu ta’uu qaba’
Sakatta’iinsa mana Obbo Abdoo Abbaa-Joobir fi hidhamuu isaaniitif sababni humnootii nageenyaan itti himame “mana keessan meeshaaleen waraanaa garaagaraa fi qabo-yaa’iin nama ajjeessuf itti karoorfattan jira,” kan jedhu akka ta’e haati warraa isaanii BBC’n haasofsiise himu.
“Mana kee keessaa rasaasatu jira. Isa fuunu malee hin deemnu jedhanin. Innimmo yoo feetan manakoo diigaa ilaalaa. Rasaasa mitii wanta lolaa wayii takka yoo agartan na fannisaa jedheen,” jedhan haasaa humnootii nageenyaa fi abbaa warraa isaanii gidduutti taasifamaa ture yeroo himan.
Haa ta’u malee sakatta’iinsa taasifameen meeshaan waraanaa argame akka hin jirreefi kitaaba seenaa fi shugguxii pilaastikaa daa’imman isaanii ittin taphatan fudhatanii deemuu isaanii himu.
Obbo Abdoon Roobii waaree booda qabamanii Waajjira Poolisiitti erga geeffamanii booda hanga kaleessaa (Kamisa) galgala sa’aa 12:30’tti jechi isaanii akka hin fuudhamne haati warraa isaanii himan. “Waraqaadhaan osoo nu waamuu danda’anii akka shiftaatti harkasaa duubatti hidhanii sadii afur ta’anii reebaa fudhatanii deeman,” kan jedhan haati warraa Obbo Abdoo Abbaa-Joobir, namootni baay’atanii kutaa tokko keessatti hidhaman sodaa tatamsa’ina dhibee Covid-19 itti uumusaa dubbatan.
Yaada Qaamolee Mootummaa fi Dhaabbilee Siyaasaa
Hidhaa fi reebichi namoota irratti taasifamu godina Jimmaa keessatti hammaachaa akka jiru BBC’tti kan himan ogeessi sab-qunnamtii uummataa ABO damee godina Jimmaa dargaggoo Gaaddisaa Abdii “miseensota, deeggartoota fi sabboontota boru nu bakka bu’anii dorgomuu danda’u jedhanii shakkan hidhaa jiru,” jechuun himaniiru. Kanaan dura dhaabbileen siyaasaa biyyattii keessa jiran mootummaan labsii yeroo muddamaa dhibee Covid-19 sababeeffachun labsame ajandaa siyaasaa ittin raawwachiifachuuf akka itti hin fayyadamneef yaaddoo qaban himaa turan.
Gama biraatin Komishiiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa fayyina hawaasaaf jedhamee labsii yeroo muddamaa yeroon labsame kanatti mirgi namoomaa sarbamuu akka hin qabne himuunsaa ni yaadatama.
BBC’n hidhaa aanaa Saqqaa Coqorsaa ilaalchisuun yaada qaamolee mootummaa gaafachuuf bulchaa aanaa Saqqaa Coqorsaa, Itti gaafatamaa Waajjira Bulchiinsaaf Nageenyaa aanichaa akkasumas Poolisii aanichaatti bilbilus yaada isaanii argachuu hin dandeenye.
Haalli jiru akkuma jiru ta’ee taatee dhagahamee hinbeekne dhagahamuu jalqabe. Mohammed Amin magaala Harar keheessatti ganama akkuma hojiif manaa baheen humnoota mootummaatin karaarraa qabamee reebichaafi tumaa hamaadhan lubbuu isaa bifa sukhanneessa taheen ajjeesan.
Gaabaasa guyyaa Caamsaa 23, 2020 BBC News, Afaan Oromoo Waayee du’a obbo Mahaammad Amiin waan odeeffanne jedhuun akka baasetti MADDA SUURAA, MIIDIYAA HAWAASAA “Obbo Mahaammad Amiin humnoota mootummaatiin karaarraa erga qabamanii booda reebamanii ajjeefaman” kan jedhu miidiyaa hawwaasummaa irratti haasa’amaa jira.
Qaamni Obbo Mahaammad Amiin iddoo garaagaraatti cicciramee kaan isaa waraabessaan nyaatamee naannoo magaala Baabbileetti akka argame ammo maatiin isaanii himaniiru.
Obbo Mahaammad torbee darbe guyyaa Kamisa gaafa 06 bara 2012 mana isaanii magaala Hararitti argamurraa hojiif akka bahanitti manatti hin deebine. Qaamni haala du’aa isaani irratti oddeeffannoo kennes hin jiru.
Obbo Mahaammad haala suukkanneessaa ta’een akka ajjeefaman dhagahuu isaanii kan himan eessumni isaanii Obbo Sharif Mahaammad, bu’aa qorannoo taasifame ilaalchisee “Hospitaalli Hiwot Faanaa waan kana jedhanii nutti hin himne” jedhu. Hospitaalli reeffa isaanii qorateera jedhame Hospitaalli Hiwot Faanaa magaala Hararitti argamu BBC dhaafis yaada kennuurraa of qusateera.
Qajeelchi poolisii godina Harargee Bahaas “dhimmichi qorannoorra jira” jechuun alatti deeffannoo biraa nuf kennuu hin dandeenye. Jecha maatii Obbo Mahaammad Amiin hojjetaa Waajjira Waldaa Hojii Gamtaa godina Harargee Bahaa yemmuu ta’an gita hojii abbaa adeemsaa irratti hojjetaa akka turan maatin isaanii irraa odeeffanne. Kana malees Obbo Mahaammad abbaa ijoollee lamaa akka ta’an fi torbee darbe Kamisaa Caamsaa 06 bara 2012 ganama hojiidhaaf manaa akka bahanitti gara manaatti akka hin deebine obboleessi isaanii Obbo Nuuraa Umar himu.
“Guyyaa Kamisaa hanga sa’aa 3:30ti waajjira turan kan jedhu waahillan isaan waliin hojjetan irraa dhageenye” jedhan. Bilbilli Obbo Mahaammadis hanga sa’aa shaniitti hojjechaa akka ture fi isa booda cufamuu isaa himan. Maatin isaanii Waajjira poolisii, Hospitaala akkasumas buufata namootni sababa dhibee Covid-19’n adda bahanii itti tursiifaman deemanii gaafatanis odeeffannoo argachuu akka hin dandeenye dubbatan. Booda guyyaa Wiixataa Caamsaa 10 bara 2012 Qajeelchi Poolisii Godina Harargee Bahaa “naannoo Baabileetti nama bineensi isa nyaachaa ture agarree asitti awwaalle” jedhanii iddoo reeffi itti argame naannoo Baabbilee fi magaala Hararitti immoo iddoo awwaalcha isaanii itti agarsiisuu isaanii obboleessi obbo Mahaammad, Obbo Nuuraa Umar BBCti himan. Awwaalchi Obbo Mahaammad gama Qajeelcha Poolisii Godina Harargee Bahaatiin raawwatamuusaa kan himan maatiin, Obbo Mahaammad Amiin, poolisootni reeffa maatiitti osoo hin agarsiisiin ofiif akka awwaalamu gochuu himu.
Boodas dhimmichi akka nuf qoratamuf Poolisii Naannoo Harariitti iiyyanne jedhu.
“Poolisiin naannoo Oromiyaa wayita reeffa fuudhu maatii osoo itti hin iyyaafatiin Hospitaala Hiwoot Faanaa geessee qorachiisera jechuun guyyuma sana awwaaluun isaa dubbiidha jennee Poolisii Magaala Harariitti iyyanne” jedhu Obbo Nuuraa Umar. Qajeelchi Poolisii Godina Harargee Bahaa sababa du’a Obbo Mahaammad ilaalchisee odeeffannoo hoomaayyu akka hin kennineef maatiin himu.
Kan Mohammed Amin magaala Harar keheessatti ta’e otoo ajaai’bamanii maaltu as deema jira jennu gochi sukaneessaan biraa asi bahe. Gaabaasa biraa Caamsaa 25, 2020 BBC News, Afaan Oromoo gabaaseen
”Mucaakoof bakka hidhamee jirutti buddeena gaafan fuudhee deemu achiin dhabe… Ilma koo osoon barbaaduu ajjeefamee sharaan maramee bakkee keessattin arge,” jechuun haati ilmisaanii jalaa ajjeefame BBCtti himaniiru. Dargaggoo Lalisaa Tafarii jiraataa Godina Wallagga Lixaa aanaa Ganjii ture. Torban lamaan darbe humna waraana mootummaa naannichaa jiruun erga qabamee booda ajjeefamee akka argame maatiin BBCtti himan.
Sanbata guddaa gaafa 02 bara 2012 A.L.Itti lafa gabaatti miseensota waraanaan qabame kan jedhan miseensotni maatii dubbisne, guyyaa lama booda gaafa Caamsaa 4 bara 2012 ajjeefamee bakkeerratti akka argame himu. Lalisaan gaa’ila dhaabbachuuf qophiirra akka tureefi kanumaaf kaadhimaa isaa argachuuf manaa akka bahe himu maatiin BBC’n dubbise. Haala ajjeechaa isaa…. Harmeen Lalisaa Aadde Caaltuu Hundeessaa akka jedhanitti Lalisaan obboleettii isaa magaalaa Finfinnee jiraattu bira turee erga gara maatii isaatti deebi’ee ji’a lama hin caalu.
Kaanis Fuulduratti isiniin geenya!
Koree Deeggarsa Hidhamtoota Siyaasaa Lammilee Oromiyaa (KDHSLO)
Uummani Oromoo kuma dhibbootan hidhamman hatattamaan akka gadidhiissaman ajjaja dabarsanii jiru. Dr Abiy Ahmed Fedhii…
Mootummaan Baraaraa Akka Hundeeffamuu Fi Mariin Siyaasaa Qooda Fudhattoota Mara Hirmaachise Akka Gaggeeffamuuf Waamicha Goona…
Yaa firaa akkana jenneef jarri hindhaabdu, kana duras hindhaabne. Nama qabsoo oromoof uf kenne ummata gargaarutu, uummata sochoosutu barbaachisa. Minda dhumaan illee qaxaramee nama kana hojetutu barbaachise. Abbaan qabeenyaa eega nagaan itti jiraachuu hindandeenye, abbaan beekumsaa eega nagaan itti hojechuu hindandeenye kun hundi lola dhugaa, qabsoo bilisummaaf ooluu qaba. Kanaaf meeshaa guddaan tokko nama itti uf kennee karooraan hojechuu danda’utu uumamuu qaba. Uumamuu yeroon jedhu, akkamu beekamu keessattis alattis Oromoon jireenya moo’ate xiqqisho. Community community dhaan namni qabsoo kannaaf ufkennu iccitiin ilaalamee filatamee iccitiin gargaaramuu qaba. Namoonni kun hojii isaan hojetan hordofamuuf gamaggamuu qaba. Waanuma fedheef iccitiin namoota oromoof hojetan nu barbaachisa. Mindaa guutuu ta’uu hinqabu garuu jarri kun supportii barbaadu. Dubbiin ulfaataadha, teenyee yoo ilaalee, akkasumaan dhiisaa jennee diinatti yoo haa sofne dhumni isaa tuffiidha. Kaan dhiisaa Abiy sareen mana Oromoo yoo Oromoo tufatee eenyutu nu kabaja. Warri akkasii diina diina caalu